तु-खबर – Tu Khabar Online
Home / तु-खबर
June 4, 2019	तु-खबर 0
पछिल्लाे समय बिभिन्न खाले भविश्यवाणि गर्ने युवा ज्याेतिस अर्जुन क्षेत्रिलाइ प्रहरिले पक्राउ गरेकाे छ। केहि समय अगाडि काठमाण्डाैमा ठुलाे भुकम्म जान्छ भन्दै एकाएक मिडियामा चर्चाका पात्र बनेका उनि भोजपुरको बसोबास र वर्तमानमा काठमांडूका सिन्धामङ्गलमा बस्ने बासिन्दा गोसालाबाट पक्राउ गरिएको थियो। काठमाडौका प्रहरीका अनुसार,भुकम्प जाने र ठुलाे जनधनकाे क्षति हुने भन्दै …
June 3, 2019	तु-खबर 0
काठमाडौं । बबरमहलमा मोटरसाइकल दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा परि चार जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । बा ९५ प ९४४१ नम्बरको मोटरसाइकलले जेब्राक्रसिङबाट बाटो काटिरहेका पैदलयात्रुलाई ठक्कर दिएको हो । सिंहदरबार प्रहरीका अनुसार मोटरसाइकलले दुईजना पैदलयात्रुलाई ठक्कर दिएपछि अनियन्त्रित भएर पल्टिएको हो । मोटरसाइकल पल्टिएपछि मोटरसाइकलमा सवार दुईजना …
May 26, 2019	तु-खबर 0
काठमाडौं । काठमाडौंको सुकेधारा स्थित नीलो पुलमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा एकको मृत्यु भएको छ भने, ६ जना घाइते भएका छन् । सुकेधारास्थित नीलो पुल नजिकैको एक सैलुनमा ग्यास सिलिण्डर विस्फोट भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले जानकारी गराउनुभएको छ । घाइते ५ जनाको शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको …
February 27, 2019	तु-खबर 0
ताप्लेजुङ पाथिभरा नजिकै भयकाे हेलिकप्टर दुर्धटनामा हेलिकप्टरमा सबार सबैकाे मृत्य भयकाे गृह मन्त्रालय ले जाकारि दियकाे छ। उक्त हेलिकप्टरमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रि रबिन्द्र अधिकारि सहित ६ जना सबार रहेकाे मा सबैकाे मृत्यु भयकाे गृह मन्त्रालयका सचिब प्रेमकुमार राइले पुष्टि गरेका छन। कलसाइन एएमाइ अल्फा माइक इन्डिया उक्त हेलिकप्टर …
February 2, 2019	तु-खबर 0
काठमाडौं, काठमाडौँमा गएराति भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी एकको मृत्यु भएको छ । काठमाडौँको भद्रकाली स्थित मन्दिरको पर्खालमा मोटरसाइकल ठोक्किदा अन्दाजी २९ वर्षीय युवकको मृत्यु भएको हो । राति करिब साढे १ बजेतिर ना १५ प ४१६३ नम्बरको मोटरसाइकल भद्रकाली मन्दिरको पर्खालमा ठोक्किँएर दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परी घाइते भएका …
पर्वत बस दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुग्यो, ३१ जना घाइते
January 17, 2019	तु-खबर 0
गलकोट । म्याग्दीको बेनीबाट चितवनको नारायणगढतर्फ जाँदै गरेको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुगेको छ। बेनीबाट नारायणगढतर्फ जाँदै ग१ख ६१०८ नं को बस आज बिहान पर्वत कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गामा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा ३१ घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने प्रहरीले जनाएको छ …
braking news: विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना, १० जनाको मृत्यु, पूर्णविवरण आउँन बाँकी
December 21, 2018	तु-खबर 0
दाङ सल्यान बाट दाङ आउँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा १० जनाको मृत्यु भएको छ। तुलसिपुरको राम्री नजिकै बस दुर्घटना भएको बताइएको छ। घटनाको पूणी विवरण आउँन भने बाकिँ छ। ३१ जना सवार बस तुलसीपुर–कपुरकोट सडकखण्डको तुलसीपुर ३ राम्रीमा दुर्घटना भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका अनुसार बस राम्रीको बाटोबाट ५ …
December 3, 2018	तु-खबर 0
दिक्तेल । बाँदरले दिने हैरानी हाम्रा लागि नौलो होइन । हामीकहाँ बाँदरले प्रायः सर्वसाधारण मानिसलाई दु:ख दिइरहेको छ । नेपालका किसानहरू बाँदर आतंकबाट बाली जोगाउन दिनभर खेत कुरेर बस्छन्। मकै बाली जोगाउन भने झनै समस्या पर्छ। गाउँमा मकै पाक्ने समयमा लिएर बाँदर लखेट्न बाध्य हुन्छन् । बाँदरले बस्तीमा पसेर अन्नबाली खान थालेपछि …
नेपालीको पिडा: दश वर्षमा ७ हजार युवा बाकसमा फर्किए ! देखेर पनि नदेखेको जस्तो नगर्नुहोला #रिप लेखेर सक्दो सेयर गरिदिनुहोला । मृत
November 5, 2018	घटना, तु-खबर, दुखद् समाचार 0
काठमाडौं । कामका लागि विदेश जान बाध्य धेरै युवाको सपना गरिबी मेटाउने नै हुन्छ । ती हरेक युवा आकासमा उड्दा एउटै कामना गर्छन्, जे हाेस् काठको बाकसमा फर्किनु नपरोस् । तर, विदेशी भूमिमा संघर्ष गर्दागर्दै कतिपयको यो याचना दैवले सुन्दैन । मृत्युले अंगालेपछि उसले कहिल्यै रहन नचाहेको कफिनमा थुनिएर फर्किन्छ, …
मासु किन्दा होसियार ! जाडो मौसमका लागि भनेर मासु पसलमा खसिबोकाका ६ महिनाअघिका खुट्टा-टाउका भेटियो
November 3, 2018	जानकारी, तु-खबर 0
युक्त जिल्ला अनुगमन समिति रुपन्देहीले बुटवलको कुरैशी मासु पसल सिलवन्दी गरेको छ । अनुगमनको क्रममा करिब ६ महिना देखि खसीबोकाका खुट्टा र टाउका (मासु)डि फ्रिजमा स्टोरेज गरेर राखेको भेटिएपछि समितिले पसल सिलबन्दी गरेको हो । बुटवलको नया“ बसपार्क पछाडि इट्टाभट्टी लाइनमा रहेको कुरैशी मासु पसलमा अनुगमन गर्दा जिल्ला अनुगमन समितिले …